25 mitsara yezuva rababa | Kuzvibatsira Zviwanikwa
Nenzira imwecheteyo yekuti kunongova naamai vamwe chete, kunongova nababa mumwe chete futi. Kana Zuva raBaba rasvika, zvakajairika kuti iwe unoda kuti ave akasarudzika kune ako uye kana iwe uine rombo rakakwana kuti uve naye padyo newe, saka iwe unoda kumupa iro rekuwedzera rudo pane rino rakakosha zuva. Kune nzira dzakawanda dzekuratidza rudo urwu, uye kuburikidza nemazwi, nderimwe rawo. Saka, usarasikirwa nemitsara iyi yezuva rababa.
Iwe unogona kusarudza iwo mitsara iwe yaunofunga kuti inokodzera zvakanyanya hukama hwauinahwo nababa vako uye kuti nenzira iyi, kana iwe uchizvitsaurira kwavari, ivo vanozonzwa vachizivikanwa nemazwi aunokumikidza kwavari uye nehukama hwauinahwo iwe.
Maitiro ekutsaurira mutsara
Kune nzira dzakawanda dzekutsaurira mutsara werudzi urwu kwaari kuti usvike pamoyo wake. Zvinogona kunge kuburikidza nekutaura pamberi pevanhu uchidzokorora mazwi akakosha kwaari. Unogona kumutumirawo meseji nemufananidzo wakanaka. Imwe pfungwa ndeyekunyora chinyorwa pakadhi rakanaka reZuva raBaba.
Unogona kunzwa kunyara nekukumikidza aya marudzi emitsara kuna baba vako, asi kana iwe ukatibvumidza kuti tikupe zano ... isa izvo zvinonyadzisa padivi. Isu tine hupenyu humwe chete uye baba vako, maererano nemutemo wechisikigo, vachasiya pasi rino pamberi pako. Iwe hauzove naye nguva dzose padivi pako.
Naizvozvo, chero mukana wekumuudza zvaunomuda uye kumuratidza kudada kwaunonzwa kuti ndibaba vako muhupenyu huno uye nezvese zvaanoitira uye zvaakakuitira, unofanirwa kuzviita.
Usarega kudada, chigumbu, kana zvimwe zvikonzero zvine chepfu zvichikanganisa hukama hwenyu. Nei uchizvibvunza mubvunzo uyu: Kana iwe waifanira kufa mangwana, zvakakodzera here kutsamwa nhasi? Zvirokwazvo kwete, uye nekuda kweichi chikonzero, zvakakosha kuti iwe utore hukama hwako nababa vako.
Kushanda kwekuteerera maitiro ekuvandudza hukama hwako
Izvo zvakakosha panguva imwechete, kuti iwe utarise hukama hwacho zuva rega rega regore! Nepo Zuva raBaba riri zuva rekupemberera, baba izuva rega rega regore. Saka usakanganwa kutarisira hukama hwako mazuva ese ehupenyu hwako.
Mitsara iwe yaunogona kukumikidza paZuva raBaba
Saka, usatambise imwe nguva, uye verenga ese mitsara yatinayo pazasi yakagadzirirwa iwe. Sarudza imwe kana dzakawanda zvaunoda uye funga nezvekuti iwe unoda kuzvitsaurira sei kuna baba vako. Iwe uchaona kuti maziso ake achazadzwa nemufaro paanoona iwo akanaka uye echokwadi mazwi iwe auri kupa kwaari.
Unokodzera wave! Nekuti iwe ndiwe unotonhorera mubereki!
Zuva rekufara Baba! Unoziva chii? Une rombo rakanaka kuva baba vangu nekuti… Hapana munhu anokuda sezvandinoita!
Panguva murume paanoona kuti pamwe baba vake vaitaura chokwadi, anotova nemwanakomana wake uyo anofunga kuti baba vake vakanganisa.
Makorokoto kumurume wehupenyu hwangu uyo, pasina kupokana, anogara ari iye akakosha uye akanakisa pane vese ... Baba Vangu.
Hupenyu hauuye nebhuku remirayiridzo, asi ndinovimba kuti rangu rakauya nababa vakanakisa ... Kutenda kusingaperi kwauri iwe Baba vangu!
Baba munhu anotarisira kuti vana vake vave vakanaka sezvaanoda kuva.
Baba, ndinokutendai nekugovana nguva dzakanakisa dzehupenyu hwangu neni. Ndimi baba vakanaka kwazvo pasi rese! Ndinokuda Baba. Zuva Rakanaka rababa!
Handsome baba, ndinokuda zvakanyanya!
Iwe wakandidzidzisa kuchovha bhasikoro, iwe wakandibatsira nebasa rangu rechikoro, wakandirapa maronda angu ... Iwe haudi kundibhadharira mari dzemota futi, handiti? Parizvino ndichagadzirisa iwe kuti urambe uchindipa rudo rwako rusingaperi! Makorokoto, Baba!
Baba havasi ivo vanopa hupenyu, izvo zvingave zvakareruka, baba ndivo vanopa rudo.
Kana mwana achangoberekwa achisvinira munwe wababa vake kekutanga nechibhakera chake chidiki, anozvibata nekusingaperi.
Baba vangu vakandidzidzisa kuti nzira chete iyo munhu anogona kuita nayo chinhu chakanaka kudzidzira uyezve kudzidzira zvakanyanya.
Baba vakanaka vanokosha kupfuura chikoro chine zana revadzidzisi.
Ndatenda baba nekusandiudza mararamiro. Iwe wakararama uye wakandidzidzisa nemuenzaniso wako.
Tsananguro yegamba inoti iye ndiye anoita chiito chinoshamisa uye nerupo chekushinga icho chinosanganisira kuzvipira nemaune kwake kuitira kuchengetedza nekushumira vamwe. Pazuva rakaita nhasi ndine chekutaura kwauri Baba: Ndinokutendai nekuva gamba rangu zuva nezuva!
Pandakazvarwa iwe wakanyemwerera nemufaro, pandakaroora wakachema nekunyungudika uye izvozvi ndinongoda kukuudza kuti ndinokuda kupfuura hupenyu hwangu.
Ndinoziva kuti kuva baba hakusi nyore nguva dzose, ndakakupa basa rakawanda, asi mukudonha kwangu kwese ndakawana maoko ako kuti asimuke. Ndatenda!
Kuvapo kwako kunondipa chivimbo mandiri kuteedzera zviroto zvangu. Nhasi uye zuva rega rega rehupenyu hwangu ndichakutenda nekuve padivi pangu. Zuva Rakanaka rababa!
Baba munhu wekudada naye, munhu wekutenda Maita, uye kupfuura zvese, munhu waunoda. Zuva Rakanaka rababa!
Nhaka yakanaka kwazvo yababa kuvana vavo inguva shoma yenguva yavo zuva rega rega.
Kuva baba kudyara nekutora midzi, kuri kudzidzisa hupenyu takabatana, neushingi uye kutsunga. Rakanakidzwa Zuva Rababa.
Iyo yakanaka kwazvo uye inoshamisa nhaka iyo baba vanogona kusiira mwanakomana wavo, ndiko kuumbwa kwehunhu uye kuratidza matanho ekutevera. Zuva Rakanaka rababa!
Baba, iwe wanga uripo, uripo uye UCHAGARA uri muchinda wangu anodakadza. Zuva rekufara!
Mubereki munhu anokutsigira iwe kana uchichema, anokutsiura kana iwe uchityora mirau, uyo anopenya nekudada kana iwe uchibudirira, uye ane rutendo mauri, kunyangwe iwe usinga.
Hupenyu hwangu hwave nematambudziko, asi hapana zviripo kana zvichienzaniswa nezvakasangana nababa vangu kuti hupenyu hwangu hutange.
Sarudza iyo yaunoda kana yaunoda uye ugozvitsaurira kuna baba vako pazuva ravo rakakosha!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvibatsiro zvekuzvibatsira » Resources » Mitsara » 25 mitsara yezuva rababa
10 mitsara yekutsaurira kuna sekuru nasekuru izvo zvinokufadza iwe